ဒီ Google Analytics ဆိုတဲ့ Tools လေးကတော့ Online
Posted by Min Thuta/ Saturday February 16th, 2019/ Blog/0Comment
သင့် လုပ်ငန်းအတွက် 2019 မှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာဖို့ ဆိုရင်တော့ Trend တွေကိုအမှီလိုက်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ မိတ်ဆွေတို့ အတွက် လက်ရှိမှာ Trend ဖြစ်နေတဲ့ Digital Marketing Trend တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်…
-ဒီတစ်ချက်တော့ သင့်ရဲ့ Product တွေကို Video နဲ့ Marketing လုပ်မယ်ဆိုရင် ၁၀စက္ကန့်ထက်မကျော်စေအောင်လုပ်ရမှာပါ။ Audience ကလဲ ၁၀စက္ကန့်ထက်ကြာတဲ့ Video
Posted by Min Thuta/ Friday February 15th, 2019/ Blog/0Comment
သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ အဆင်မပြေအလိုမကျတဲ့ Customer တစ်ယောက်က Negative Comment ဒါမှမဟုတ် Message တွေပေးလာခဲ့မယ်ဆိုလျှင်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကျမလဲ? Internet Marketing အသုံးပြုနေပြီဆိုရင်တော့ သင့် လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Information တွေဖြစ်တဲ့ User တွေရဲ့ Reach, Engagement, Feedback တွေရရှိပါတယ်။ Reach, Engagement ကတော့ များများရရင် ကောင်းပေမဲ့ Feedback မှာဆိုရင်တော့
တဲ့ Instagram Video Option တွေနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် Branding ပြုလုပ်နေကျပါပြီ။ မိမိရဲ့
သင် Social Media ပေါ်မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် ခိုင်မာတဲ့ Social Media Relationship တစ်ခုတော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ Social Media လုပ်ငန်းပေါ်က
လက်ရှိကာလမှာ အသုံးဝင်နေတဲ့ E-Commerce Tools များ
ကောက်နုတ်ရရှိခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ 2018 ခုနှစ် U.S ရဲ့ E-commerce Sales ရရှိမှုဟာဆိုရင် $500 Billion ထိရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ U.S တစ်နိုင်ငံထဲမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ E-commerce Sales ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ယခုလို E-commerce ဈေးကွက် တွင်ကျယ် လာခြင်းကတော့ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ Smart Phone အသုံးပြုမှုများပြားလာခြင်း၊
Social Media ဘယ်ကစတင်ခဲ့သလဲ ?
Social Media အသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်လာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ မိမိတို့လုပ်ငန်းတွေကို Social Media ကိုအသုံးပြုပြီး ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နေကျပါပြီ။ဒါကြောင့် Social Media ဘယ်လိုစတင်ပေါ် ပေါက်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါမယ်။ Social Media Channel တွေဟာ 2000 ခုနှစ်လောက်ကထဲ ကစ တင်ပြန့်နှံ့လာပြီးယခုအချိန်မှာတော့လူတွေဟာ ပျမ်းမျှ ၁၃၅ မိနစ်လောက်အချိန်ကို Social Media Channel တွေဖြစ်တဲ့ Facebook
Traditional Marketing နဲ့ Digital Marketing အကြောင်း
အောင်မြင်တဲ့ Business တစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဆိုရင် သင့်တော်တဲ့ ဈေးကွက်ရှာဖွေမှု၊ High-Quality Product တွေရှိနေရုံနဲ့ မပြီးပြည့်စုံပါဘူး။ Business တစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အဓိက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မဏ္ဍိုင်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သင့် Business နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Audience အသိုင်းအဝိုင်းဆီကို Target ထိနိုင်မယ့်၊ မှန်ကန်တဲ့ Marketing Technique တွေကိုသုံးပြီး သင့်ရဲ့
Posted by Min Thuta/ Wednesday February 6th, 2019/ Blog/0Comment
Business Run နေရာမှာ Feedback မရလို့စိတ်ညစ်နေပါသလား?
Business တစ်ခုရဲ့ ရလဒ်ကောင်းမကောင်းကို User Feedback တွေကို ကြည့်ပြီး ပြန်လည် သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်User တွေသင့်ရဲ့ Business အပေါ်မှာ ဘယ်လို Feedback တွေပေးလေ့ရှိကြလည်း၊ ဘာကြောင့် Feedback မရလည်းဆိုတာတွေက ‘ User Experience’ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ‘ User Experience’ ကို တစ်နည်းအားဖြင့်
Permanent Public Post တွေတင်နိုင်တော့မယ့် Snapchat
လူသုံးများနေတဲ့ Social Media Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Snapchat ဟာ သိပ်မကြာခင်ကာလမှာ Public Post တွေကို Permanent တင်နိုင်ဖို့ Develop လုပ်နေပြီလို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒီအချက်ကတော့ Snapchat ချစ်သူတွေ ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးလိုက်တာလို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် Snapchat မှာ Post